लोकसेवामा सोधिने नेपालको इतिहास सम्बन्धि अत्ति महत्वपूर्ण प्रश्नउत्तर – Himalitimes
लोकसेवामा सोधिने नेपालको इतिहास सम्बन्धि अत्ति महत्वपूर्ण प्रश्नउत्तर
२०७७ पुष १९ १९:५४ मा प्रकाशित
नेपालको इतिहास सम्बन्धि अत्ति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान
राजाको उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने चलन कसले चलाए ?
बुङमतीको शिलालेख कसले स्थापना गरे ?
अंशुवर्माले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रा कुन हो ?
गोपाल वंशावली अनुसार अन्तिम किराँती राजा को थिए ?
खिगु , भाषा वंशावलि अनुसार गालिज, राईट वंशावली अनुसार गस्ति
उपत्यकाका ४ नारायणहरुको स्थापना र वैष्णव धर्मको उत्थान गर्ने राजा को हुन ?
रातो मच्छिन्द्र नाथको भोटो जात्रा हेर्ने पहिलो लिच्छवी राजा को हुन ?
लिच्छवी कालमा कतिवटा अधिकरणको व्यवस्था गरिएको थियो ?
चार ( कुथेर, माप्चोक, लिंगवल, शुल्ली वा शौल्ला )
लिच्छवी कालमा जानपद भन्नाले के बुझिन्थ्यो ?
गाउँमा बस्ने जनता
लिच्छवी कालमा एक जातिले अर्को जातिसगँ बिहे गरेमा के लाग्थ्यो ?
विराट नगर जुट मिलको स्थापना कहिले र कसले गरे ?
वि सं १९९४ मा जुद्द शमसेर
नेपालमा जहाँनिया राणा शासनको सुरुवात कसले गरेका थिए ?
भृकुटीलाई तिव्वतमा चिनिने नाम ?
अंशुवर्माले छोरी भृकुटीको विवाह को सँग गरिदिएका थिए ?
तिव्बती राजा स्रोङ्चङगम्पो सँग
भृकुटीलाई तिव्वती भाषामा के भनिन्छ ?
भृकुटीको वाल्यकालको नाम के थियो ?
हरिततारा भन्नाले कसलाई चिनिन्छ ?
जंगबहादुरको निधन कहिले र कहाँ भयो ?
वि सं १९३३ रौतहटको पत्थर घट्टामा
नेपालको इतिहासमा कसलाई गर्भे जनरल भनेर चिनिन्छ ?
जंग बहादुरको कान्छो छोरा विरजंग कुँवर (राणा)
कमाण्डरी किताव खानाको स्थापना कसले गरे ?
अंशुवर्माले बनाएको विहारलाई के भनिन्छ ?
नेपालमा कुन वंशको शासनकाललाई अध्यारो युग भनिन्छ ?
नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति विरुपाक्ष कुन समयमा बनेको थियो ?
नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति विरुपाक्षको मुर्ति कहाँ रहेको छ ?
पृथ्विनारायण शाहले पहिलो पटक आक्रमण गरेको राज्य कुन हो?
पृथ्विनारायण शाहले नुवाकोट माथि पहिलो आक्रमण कहिले गरेका थिए?
वि सं १८००मा
नरभुपाल शाहले नुवाकोटमा कहिले आक्रमण गरेका?
थिए वि सं १७९४मा
पृथ्विनारायण शाहको मृत्यु कहाँ भएको थियो ?
नुवाकोटको देविघाटमा (वि सं १८३१ माघ १ गते )
पृथ्वि नारायण शाहले नुवाकोटमा दोस्रो आक्रमण कहिले गरे?
वि सं १८०१ मा (गोर्खा राज्यले गरेको यो तेस्रो आक्रमण थियो यस अघि बाबुले १७९४ मा पहिलो आक्रमण गरेका)
कस्को नेतृत्वमा उक्त दोस्रो आक्रमण भएको थियो ?
पृथ्वि नारायण शाहका गुरु को थिए ?
पृथ्विनारायण शाहले सर्वप्रथम विजय हासिल गरेको राज्य कुन हो ? – नुवाकोट वि सं १८०१ असोज १५ मा
नेपालमा कुन वंशको शासनकाललाई स्वर्ण युग भनिन्छ ?
कसको शासनकाललाई लिच्छवी कालको स्वर्ण युग भनिन्छ ?
जंगबहादुरले कसको नेतृत्वमा अलौमा फौज पाठाएका थीए ?
कनक सींह र बमबहादुर
राणा कालिन समय भन्नाले कुन अवधिलाई चिनिन्छ ?
वि सं १९०३ मा जंगबहादुरको उदय पछी वी सं २००७ सम्म १०४ वर्षे जहाँनिया राणा सासन काल हो
जाइकटक नगर्नु झिकि कटक गर्नु यो कसको भनाइ हो ?
पृथ्विनारायण शाहका जेठा छोरा को थिए ?
प्रताप सिहं शाह
कर्षापण, पशुपति, कुन कालमा प्रचलिच मुद्राहरु हुन ?
नेपाल एकीकरण को समयमा त्रिशक्ति भन्नाले कुन कुन राज्य लाई चिनिन्थ्यो ?
पाल्पा, तनहुँ र लमजुङ
लिच्छवी कालमा कुन लिपी प्रचलनमा थियो ?
लिच्छवीकालमा न्यायिक अधिकार को सँग थियो ?
राजादेखि स्थानीय पाञ्चाली सम्म थियो ।(न्याय छिटो सम्पन्न होस भनेर )
लिच्छवी कालमा खेतलाई कति भागमा बाँडिएको थियो ?
३ खेतको स्वामित्वका आधारमा राजा वा राजपरिवारको खेत, संघसंस्थाको खेत र जनसाधारणको खेत
लिच्छवी कालमा प्रचलनमा रहेका मुद्राहरु कुन कुन हुन ?
मानाङ्क,गुणङ्क, अंशुवर्मा, पशुपति, जिस्ण गुप्त, वृष आदि ।
लिच्छवीकालीन राज्यको राजस्वको प्रमुख स्रोत के थियो ?
लिच्छवी कालमा त्रिकर भन्नाले कुन कुन करलाई बुझिन्थ्यो ?
भाग, भोग र कर
सबैभन्दा पहिले कोट लगाउने र विश्वमै सबै भन्दा वढि बाघको सिकार गर्ने व्यक्ति को हुन् ?
नेपालमा चिया कसको पालामा भित्रिएको हो ?
लिच्छवीकालमा ग्रामिण प्र्रशासनिक एकाईहरुलाई कति वर्गमा विभाजन गरिएको थियो ?
लिच्छवीकालमा ग्रामिण प्र्रशासनिक एकाईहरुलाई ग्राम, तल, द्रंग गरी ३ वर्गमा विभाजन गरिएको थियो
लिच्छवीकालमा शिक्षा सम्बन्धि कार्य गर्ने संस्थालाई के भनिन्थ्यो ?
लिच्छवीकालमा व्यापारीक केन्द्रलाई के भनिन्थ्यो ?
लिच्छवीकालमा साधारण व्यापारीलाई के भनिन्थ्यो ?
नेपालको पहिलो छपाइ मेसीन गिद्दे प्रेश वि सं १९०८ भित्राउने को थिए ? – जंग बहादुर
नेपालको इतिहासमा अभागी राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ ?
श्री ५ राजेन्द्र
लिच्छवीकालमा गाउँ गाउँ घुमी कर उठाउने व्यक्तिलाई के भनिन्थ्यो ?
लिच्छवीकालमा राजालाई के भनी सम्मान गरिन्थ्यो ?
लिच्छवीकालमा व्यापारीलाई सार्थ भनिन्थ्यो भने व्यापारीको नाइकेलाई के भनिन्थ्यो ?
अशोक स्तम्भमा भएको शिलालेखमा कुन भाषाको प्रयोग भएको छ ?
लालमोहरको चलन कसले चलाय ?
राष्ट्रिय झण्डा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन ?
पृथ्विनारायण शाहले भारद्वाज गोत्र त्यागी कुन गोत्र धारण गरेका थिए? – कश्यप
खरिदार पदको चलन कसले चलाएका हुन ?
अंशुवर्मालाई महासामन्तको पदवी दिने राजा को हुन ?
अंशुवर्मा शिवदेव प्रथमका को थिए ?
सरकारि हुलाकी नियुक्ति गर्ने चलन कसको पालामा शुरु भएको हो ?
पृथ्विनारायण शाह संग उत्तराधिकारका लागी विवाद भएका राजकुमार को हुन ? – वृन्दकेशर शाह
पृथ्विनारायण शाह र वृन्दकेशर शाहविच उत्तराधिकारका सम्वन्धमा किन विवाद भएको थियो ?
जन्मका आधारमा पृथ्विनारायण जेठा र गर्भका आधारमा वर्न्दकेशर जेठा भएको हुदाँ
लिच्छवीकालमा अन्तरजातिय बिवाह गर्दा के लाग्थ्यो ?
लिच्छवी कालमा भूमिलाई कति भागमा बाँडिएको थियो ?
खेत, पाखो र जंगल गरी ३ भागमा
किर्तिपुरमाथि गोरखाली फौजले पहिलो आक्रमण कहिले गर्यो?
वि सं १८१४ मा
काजि कालु पाडेँ ले कहाँको युद्दमा विरगति प्रप्त गरेका थिए ?
किर्तिपुरको प्रथम युद्दमा, १८१४ मा
किर्तिपुरले कसको सहयोग पाएको थियो?
काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर
पृथ्विनारायण शाहले किर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण कहिले गरे ?
वि सं १८२१ भदौ मा (गोर्खाको हार)
किर्तिपुरको दोस्रो युद्दको नेतृत्व कसले लिएका थिए ?
सुर प्रताप शाह, दलजित शाह र श्री हर्ष पन्तले
पृथ्विनारायण शाहका भाई सुरप्रताप शाहाको आँखा कुन युद्दमा फुट्यो ? – किर्तिपुरको दोस्रो युद्दमा
गोर्खाली फौजले किर्तिपुरमाथी तेस्रो आक्रमण कहिले गर्यो ?
वि सं १८२२ मा चैत्र ३ मा विजय भएको थियो
किर्तिपुरको तेस्रो युद्द कसको नेतृत्वमा भएको थियो ?
काजि वंसराज पाँडे
वंसराज पाँडे को हुन ?
कालु पाडेँका छोरा
गोर्खालि फौजले कति औ पटक किर्तिपुरको विजय हासिल गरेको थियो ? – तेस्रो पटकको युद्दमा (१८२२ चैत्र ३ मा )
गोर्खा सैनिकले मकवानपुर माथि कहिले विजय प्राप्त गरे ?
वि सं १८१९ मा
मकवानपुरमा पृथ्वीनारायण शाहले को संग युद्द गरेका थिए ?
जेठान दिग्वन्धन सेन
मकवानपुरका राजा दिग्वन्धन सेनको आग्रहमा वंगालका राजा द्वारा पठाइएको अभियानलाई के भनिन्छ? मिरकासिम अभियान
लमजुङका राजा को थिए ?
पृथ्वि नारायण शाहले कान्तिपुर विजय कहिले गरे ?
वि सं १८२५ आश्विन १३ गते
उपत्यका कब्जा गर्न पृथ्विनारायण शाहले कस्तो निति लिएका थिए ? – साम दाम दण्ड भेद को
उपत्यकामा आर्थिक नाका वन्दि गरेकाले उपत्यका मा आर्थिका संकट भयो र अप्ठ्यारोमा परेका पाटनका ६ प्रधानले पाटनको राजा बन्न बोलाए पछी पृथ्विनारायण शाहले कसलाई राजा बन्न पठाए ? दलमर्दन शाह
गोर्खाली फौजले कान्तिपुर माथि कसरी विजय प्रप्त गर्यो?
इन्द्र जात्राको अवसर पारि नरदेवी, भिमसेन स्थान र टुडिखेल गरी तिन स्थान वाट अक्रमण गरी विजय प्राप्त गरे ।
कान्तिपुर विजय पश्चात कान्तिपुरका अन्तिम राजा जय प्रकाश मल्ल भागेर कहँ गई शरण लिएका थिए ? पाटनमा
पृथ्विनारायण शाहले पाटनमाथी कहिले विजय प्राप्त गरेका थिए ?
वि सं १८२५ आश्विन २५ गते
कान्तिपुरका अन्तिम राजा जय प्रकाश मल्ल र पाटनका अन्तिम मल्ल राजा तेजनरसिंह मल्लले हार पस्चात कहाँ शरण लिएका थिए ?
भक्तपुरका राजा रणजित मल्ल संग
पृथ्विनारायण शाहले भक्तपुरमाथि कहिले विजय हासिल गरे ?
१८२६ मंसिर १
भक्तपुर माथि आक्रमण कसको नेतृत्वमा भएको थियो?
पृथ्विनारायण शाहले कहिले राज्यारोहण गरेका थिए ?
वि सं १७९९ मा (२० वर्षको उमेरमा )
राष्ट्र निर्माता र नेपालका राष्ट्रिय विभुति भन्नाले कसलाई चिनिन्छ ? – पृथ्वि नारायण शाह
पृथ्विनारायण शाहको मृत्यू त्रिशुली र तादी नदीको संगम ( देविघाटमा )भएको थियो ।
योग्य वावुका अयोग्य सन्तानका रुपमा कसालाई चिनिन्छ ?
तिन कोठिमा हामि पनि पञ्च पाण्डव जस्तै भएका थीयौ यो कसको भनाइ हो ? पृथ्वीनारायण शाह
पृथ्विनारायण शाहले काठमाण्डौ लाई नेपालको राजधानि भनि कहिले घोषणा गरे ? – वि सं २०२६ चैत्र १० मा
विजय अभियानको स्वण यूग भनि कसको नायवी काललाई भनिन्छ ? – बहादुर शाहको
राजकीय छापलाई लालमोहर किन भनियो ?
छापमा रातो रङ्गको प्रयोग गरिने भएकोले
पृथ्विनारायण शाहले राजकिय छापमा रातो रङको प्रयोग गर्नु अघि कुन रंगको प्रयोग गरीन्थ्यो ?
खानगी प्रथा भन्नाले के वुझिन्छ ?
पृथ्विनारायण शाहको पालामा सैनिकहरुलाई जग्गा तथा आर्थिक सहायता दिने प्रथा
प्रताप सींह शाहका भाई को थिए ?
प्रताप सिहं शाह पछि कसले नायवि चलाएका थिए ?
राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहले
अभिरवंशी प्रथम राजा को हुन् ?
नेपालको पहिलो मुलिकी ऐन कसको पालामा जारी भएको थियो ?
राजा सुरेन्द्र विक्रम शाह
नेपालको पहिलो जनमत संग्रह कुन राजाको पालामा भएको थियो ?
राजा विरेन्द्र को पालामा २०३७ मा
नेपालको इतिहासमा अचेत अवश्थामै राजा घोषणा गरीएका राजा को हुन ?
दिपेन्द्र विक्रम शाह
श्री ५ विरेन्द्रको निधन कहिले भएको थियो ?
२०५८ जेठ १९ नारायणहिटि हत्याकाण्डमा
दिपेन्द्र कति अवधि राजा भए ?
५४ घण्टा ३० मिनेट
आफ्नो पनातिको राज्यारोहण हुने वेला सम्म जिवित रहने राजा को हुन ?
राजाले घटाएको पर्व भनेर कुन पर्व लाई चिनिन्छ ?
रण बहादुर शाहलाई कसको अवतार मानिन्छ ?
बासट्ठिहरण को घटना कसको पालामा घटेको थियो ?
उ बाच्न लाएक छ जो मर्न देखि डराउदैन कसको भनाइ हो ?
साम्यवाद मोटर चढेर आउदैन भन्ने भनाइ कसको हो ?
राजा महेन्द्र को
भिमसेन थापा ले नेपाललाई कति जिल्लामा विभाजन गरेका थीए ?
नेपालमा राहदानिको सूरुवात गर्ने को हुन ?
विजय अभियानको स्वण युग भनि कसको नायवी काललाई भनिन्थ्यो ? – बहादुर शाह
नेपालको इतिहासमा बुलेट महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ ?
श्रि ५ त्रैलोक्य
पृथ्विनारायण शाहका मातापिता को थिए ?
माता कौशल्यावति र पिता नरभुपाल शाह थिए ।
पृथ्विनाराय शाहका मित वुवा र मित आमा को थिए ?
रणजित मल्ल र जय लक्ष्मी मित वुवा आमा थिए
नुवाकोटको विजयपछि छाला काढेर मारीने व्यक्ती को हुन ?
जयन्त राना (बेलकोट बाट पक्राउ गरी नुवाकोटमा ल्याएर छाला काढियको थियो )
नुवाकोट कान्तिपुरबाट शासित थियो र त्यहाँका मुख्य प्रशासक र सेना प्रमुख को थिए? – जयन्त राना
प्रथम विश्व युद्ध का वेला नेपालका राजा को थिए ?
त्रिभुवन शाहका व्यायाम प्रशिक्षक को थिए ?
सहिद धर्मभक्त माथेमा
सवै भन्दा वढि उमेरमा राजा हुने शाह बंशिय राजा को हुन ?
उनि ५४ वर्षको उमेरमा राजा भएका थिए
शाहवंशीय राजाहरुमा सबैभन्दा कम उमेरमा राजा हुने को हुन ?
गिर्वाण युद्द विक्रम शाह
शाह उपाधि धारण गर्ने प्रथम राजा को हुन् ?
उपत्यकामा टेलिफोनको सुरुवात कहिले र कस्को पालामा भयो ?
वि सं १९७० मा चन्द्र शमसेरको पालामा
त्रिचन्द्रकलेजको स्थापना कहिले र कस्को पालामा भयो ?
वि सं १९७५ मा चन्द्र शमसेरको पालामा
यूरोपभ्रमण गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्रि को हुन ?
जंगबहादुर राणा वि सं १९०६ मा एक वर्ष
राणा उपाधि धारणा गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन ?
सी क्लसका राणाहरुलाई उपत्यकावाट निस्कासन कसले गरेका थिए ? – जुद्ध शमसेरले
सुदारवादी र उदारवादी राणा प्रधानमन्त्रि भन्नाले कुन प्रधानमन्त्रिलाई चिनिन्छ ? – देवशमसेर
रुन्चे प्रधानमन्त्री भनेर नेपालका कुन प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ ? – पद्म शमसेर
म राष्ट्रको नोकर हूँ भन्ने राणा प्रधानमन्त्रि को हुन ?
चर्खा प्रचारमा रोक लगाउने राणा प्रधानमन्त्रि को हुन ?
शुक्रबार आधा र शनिवार बिदा दिने चलन कसले चलाए ?
अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री को हुन् ?
आकाशवाणीको स्थापना र राष्ट्रिय आर्थिक समितिको गठन कसले गरेका थिए ?
पञ्चांगको प्रकाशन कुन प्रधानमन्त्रिको पालामा भएको हो ?
रणोद्दिपसींह वि सं १९४१
तेजारथ अड्डाको स्थापना कसले गरेका हुन ?
विर अस्पतालको निर्माण कसले कहिले गराएका हुन ?
विरशमसेरले १९४७ मा
धिरशमसेर का १७ भाई छोरा मध्य सबैभन्दा जेठा को हुन ?
दरवार हाइस्कुलको स्थापना कसले गरेका हुन ?
कुन वंशको शासनकालमा नेपालको प्रशासनिक ढाचाको निर्माण भएको मानिन्छ ?
किरातँहरु कुन वंशका थिए ?
नेपाल उपत्यकामा अभिर वंश पछि कुन वंशले शासन गरेको थियो ?
नेपालको पहिलो वैज्ञानिक को हुन ?
गेहेन्द्र शमसेर राणा
गेहेन्द्र शमसेरका बावु को थीय ?
राणा प्रधान मन्त्रि विरशमसेर
अक्षरांक शिक्षा नामक प्रथम नेपालि भाषाको किताव कसले तयार गरेका थिए ?
जय पृथ्विबहादुर सिंहले (बाल वोध ,श्रेस्ता बोध, भुगोल बोध,अदि पनि उनका कृति हुन )
जय पृथ्विबहादुर सिंहको अंक्षराङ्क शिक्षा माथि कहिले प्रतिवन्ध लगाइएको थियो ?
वि सं १९६४ मा ससुरा चन्द्र शमसेरले
वंशावली भन्नाले के बुझिन्छ ?
राजाहरुको नाम आदि लेखिएको साहित्यलाई
गोपाल राज वंशावली कुन भाषामा छ ?
नेपालको सबैभन्दा पुरानो वंशावली कुन हो ?
गोपाल राज वंशावली
इतिहास भन्नाले के बुझिन्छ ?
विगतका घटनाहरुको व्याख्या, विश्लेषण एवं वर्णन हो
को हुन ? हेरोडोटस ? इतिहासका पिता कहाँका थिए हेरोडोटस ?
नेपालका इतिहास शिरोमणि भन्नाले कसलाई चिनिन्छ ?
नेपालको संक्षिप्त वृतान्त कसको कृति हो ?
अभय मल्ल कसका छोरा हुन् ?
भूकम्पमा परि निधन हुने राजा को हुन् ?
भगवतीसँग पासा खेल्ने मल्ल राजा को थिए ?
जगज्योति मल्लपछि भादगाउँका राजा को भए ?
जगतप्रकाश मल्ल कहाँका राजा थिए ?
आफूलाई गन्धर्व विद्यागुरु भनी लेख्ने राजा को हुन ?
ईन्द्र जात्रामा कुमारीको रथ तान्ने वा धुमाउने चलन कसले चलाएका हुन ?
बालाजुको २२ धारामध्ये २१ धारा निर्माण गर्ने मल्ल राजा को हुन ?
जयस्थिति मल्ल कुन वंशका थिए ?
जयस्थिति मल्लको बिवाह को सँग भएको थियो ?
जयस्थिति मल्लले कसको नाताले शासन संचालन गरेका थिए ?
आफ्नो नामको अगाडि सुमति लेख्ने राजा को हुन ?
जितामित्र मल्ल कहाँका राजा थिए ?
रानी पोखरीको निमार्ण कसले गरेका हुन ?
रानी पोखरीको निमार्ण कहिले भएको हो ?
प्रताप मल्लका कति रानिहरु थिए ?
३ रुपमति, राजमति र लालमति
भक्तपुर दरबार अगाडिको शालिक कसको हो ?
भक्तपुर दरबार क्षेत्रका कलाकृति, मालति चोक आदिको निर्माण गर्ने राजा को हुन ?
भक्तपुरको ५५ झ्याले दरबार कसले बनाएका हुन ?
मध्यकाल भन्नाले कुन अवधिलाई चिनिन्छ ?
बि.स. ९३६ देखि नेपालको एकिकरण बि.स. १८२५ सम्मको करिब ९०० बर्षको अवधिलाई
मध्यकाल भन्ने बित्तिकै मल्लकालको रुपमा अध्ययन गरेपनी यस समयमा कर्णाली क्षेत्रमा खस मल्लवंशि, पाल्पामा सेन वंशी, गोर्खामा शाहवंशी राजाहरुको समेत शासन थियो ।
के को दृष्टिकोणले मल्ल काललाई स्वर्ण काल भनिन्छ ?
नेपालको कला र संस्कृतिको विकासको दृष्टिकोणले
महेन्द्र मल्ल कहाँका राजा थिए ?
महेन्द्र मल्लले चलाएको चाँदीको मुद्रा (मोहोर) लाई के भनिन्छ ?
नेपाल उपत्यकालाई कान्तिपुर, पाटन र भादगाउँका रुपमा विभाजित गरि आफ्ना छोराहरुलाई बाढ्ने राजा को हुन ?
एकीकृत नेपाल उपत्यकाका अन्तिम राजा को हुन् ?
योगनरेन्द्र मल्ल कहाँका राजा थिए ?
जबसम्म मेरो शालिक माथि रहेको चरा उडेर जान्न तबसम्म मलाई जिवितै सम्झनु भन्ने राजा को हुन ?
योगनरेन्द्र मल्लको मृत्यु हुदाँ कति रानीहरु सती गएका थिए ?
सिद्धिनरसिंह मल्ल कहाँका राजा थिए ?
छालाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन् ?
परस्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोपमा तलेजुको मन्दिरमा काटिने राजा को हुन ?
धोविको हातको पानी चलाउने राजा को हुन ?
लक्ष्मी नरसिंह मल्ल
कान्तिपुरको नामाकरण कसको पालामा भएको हो ?
नेपालमा मुसलमानहरुको प्रवेश कसको पालादेखि भएको हा ?
तामाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन ?
झ्यालमा रंगीन सिसा राख्ने चलन कसले चलाएका हुन ?
रणजीत मल्ल कहाँका राजा हुन ?
तमाखुमा बिष मिलाई सड्यन्त्रपूर्वक मारिने मल्ल राजा को हुन ?
नेपाल मण्डलेश्वर/चुडामणि चक्र उपाधि धारण गर्ने राजा को हुन ?
भक्तपुरको दत्तात्रेयको मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन ?
कोत पर्व कहिले घटेको थियो ?
बि.स. १९०३ आश्विन २ गते राती
के कारण घटेको थियो ?
फत्तेजंग चौतारीयाको प्रधानमन्त्रित्वमा गठित एक प्रमुख सदस्य तथा महारानी राज्यलक्ष्मि देविको प्रिय पात्र गगन सिंहको हत्या नै कोतपर्वको सुरुवाति कारण थियो
गगन शिंहको हत्या कसले गरेका थिय ?
भण्डारखाल पर्व कहिले घटेको थियो ?
वि सं १९०३ कार्तिक १२
भण्डारखाल पर्व कसको विरुद्ध रचिएको थियो ?
अंशुवर्माले चलाएको संवतलाई के भनिन्छ ?
कैलाश कुट भवनको निमार्ण कसले गरेका हुन् ?
अंशुवर्माले (अत्यन्त कलात्मक भव्य र प्रशंसनीय तवरले तयार गरेका थिए ।)
उपत्यका विभाजन हुनुभन्दा अघि यक्ष मल्लको राजधानी कहाँ थियो ?
विभाजन पछि कान्तिपुरका प्रथम राजा को भए ?
नेपालका राष्ट्रिय विभूति एवं प्रसिद्ध कलाकार अरनिकोको जन्म कहिले भएको थियो ?
अरनिको नेपालको कुन ठाउँमा जन्मेका थिए ?
अरनिको चिन कहिले गएका थिए ?
एउटै रुखबाट काष्ठमण्डप बनाउने को हुन ?
काष्ठमण्डप अर्को के नामले चिनिन्छ ?
गुणकामदेवलाई अर्को के नामले चिनिन्छ ?
शाक्यवंशको कन्यालाई कुमारी बनाई कुमारीको पूजा गर्ने चलन चलाउने राजा को हुन ?
लिच्छवीकालका एक मात्र कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ ?
जयदेव द्वितीय (उनको कविता पशुपति शिलालेखमा अंकित छ)
परचक्रकाम(अर्काको देश जित्ने अभिलाषा) उपनामले विभूषित लिच्छवी राजा को हुन् ?
नरेन्द्रदेव कसका छोरा हुन ?
तिब्वतमा शरण लिने लिच्छवी राजा को हुन ?
प्रशिद्ध भद्राधिवासको निमार्ण कसले गरेका हुन ?
नरेन्द्रदेवले( नरेन्द्रदेवले यहिबाट राज्य सञ्चालन गर्थे)
रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा र भोटो जात्राको चलन चलाउने राजा को हुन ?
पशुपतिनाथको मन्दिर कसले बनाएका हुन ?
पशुपतिलाई राजमान्यता कसले दिए ?
स्वयम्भुको ज्योति माथि चैत्यको निमार्ण गर्ने कसले गरेका थिए ?
मानदेवका छोरा को थिए ?
मानदेवकी छोरीको नाम के थियो ?
लिच्छवीहरु भारतको कुन ठाउँबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए ?
भारतको बैसाली बाट (यिनीहरु भारतको बैसालिका राजा अज्ञात शत्रुबाट पराजित भएर सरणार्थीको रुपमा नेपाल प्रवेश गरेका थिए)
लिच्छवीहरु कुन वंशका थिए ?
सूर्य वंशी (सूर्य वंशीहरु राजा दशरथका वंशज थिए)
नेपालमा द्धैध शासनको थालनी कसले गरेका हुन ?
चाबाहिल चैत्यको स्थापना कसले गरेका हुन ?
वृषदेवलाई अर्को के नामले चिनिन्छ ?
किर्तीपुर स्थित बाघभैरवको मन्दिर कसको पालामा बनेको हो ?
सुकीको चलन कसले चलाए
लिच्छवी कुलकेतु उपाधी धारण गर्ने को हुन ?
कीर्तिपुरमा बस्ति बसाल्ने राजा को हुन ?
पशुपतिको देवल कसले बनाएका हुन् ?
नेपालमा कहिलेदेखि व्यावस्थीत राजतन्त्रको सुरुवात भएको मानिन्छ ?
मल्लकालमा न्यायका श्रोत कसलाइ मानिन्थ्यो?
राजालाई, राजाले कानुन निर्माण गर्ने तथा न्याय सम्पादन गर्ने गर्दथ्ये।
नेपाल उपत्यकामा आउने प्रथम वुद्ध को हुन ?
विरविक्रम उपाधि पाउने प्रथम राजा को हुन ?
गिर्वाययुद्द विक्रम शाह
राष्ट्रिय संग्रहालय कहाँ छ ?
काठमाण्डौ छाउनिमा रहेको राष्ट्रीय संग्राहालय कसले निर्माण गराएका थिए? – भिमसेन थापा
शुरप्रताप शाहको आखाँ कुन युद्दमा फूटेको थियो ?
किर्तिपुरको दोस्रो युद्दमा
कालु पाडेँ ले विरगति प्राप्त गरेको युद्दकुन हो ?
किर्तिपुरको पहिलो युद्द
राणा कालको अन्त्यपछि नेपालका प्रधानमन्त्री को भएका थिए ?
३८ सालको पर्व हुदाँ नेपालका प्रधानमन्त्रि को थिए ?
रणोद्दिपसिंहको हत्या कहिले भएको थियो ?
वि सै १९४२ मा ४२ सालको पर्वमा डम्वर शमशेरद्धारा गोलीहानि हत्या गरेर धिरशमसेरका छोराहरुले सत्ता हत्याएका थिए ।
मेट्रीक पास गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्रि को हुन ? – चन्द्र शमसेर यिनले कोलकत्ता विश्व विद्यालय बाट मेट्रिक पास गरेका थिए यिनलाई अक्फोर्ड विश्वश्विद्यालयले डाक्टर अफ सिभिल ल को उपाधि दिएको थियो
राणा हरुलाईab c क्लासमा विभाजन गर्ने प्रधानमन्त्रि को हुन ?
जंगबहादुरकी आमा को थीइन ?
रक्षा ठकुरी ।
जुवा खेल्न रोक्नका लागि बर्षभरी ११ दिन ख्ल्न पाउने व्यावस्था कसले बनाएका थिए ?
कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यावस्था कसले गरेका हुन?
नेपालमा महाभुकम्प कहिले र कसको पालामा गएको थियो ?
वि सं १९९० माघ २ जुद्द शमसेरको पालामा
पद्मा शमसेर कसका छोरा हुन ?
स्कुलका पिता भनेर कुन प्रधानमन्त्रि लाई चिनिन्छ ?
किन स्कुलका पिता भनियो ?
यीनले थुप्रै स्कुलको स्थापना गरेका हुनाले
लाईब्रेरी पर्व ,वसन्त शमसेर पर्व कसको पालामा घटेको पर्व हरु हुन ?
प्रचण्ड गोरखा पर्व कसको पालामा घटेको थियो? – भीम शमसेरको पालामा
नेपाल र भारत विच भएको सन १९५० को सन्धि मा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए ?
प्रताप मल्ल कति भाषाका ज्ञाता थिए ?
चार कुने मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन् ?
प्रसिद्ध न्यातपोल मन्दिर बनाउने राजा को हुन ?
चादीको मोहर प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन् ?
ज्योतिषहरुलाई बस्न माणिमण्डल बनाउने राजा को हुन ?
काष्ठमण्डप (मरुसत्तल)को निर्माण गर्न लगाउने को हुन ?
बौलाहा राजा भन्नाले कुन राजालाई चिनिन्छ ?
२१ गजुर भएको पाटनको कृष्ण मन्दिर कसले बनाएका हुन ?
पाटनको कृष्ण मन्दिर कुन शौलीमा निर्माण गरिएको मन्दिर हो ?
पशुपतिमा महास्नान गराउने राजा को थिए ?
मल्लकालमा एकीकृत नेपाल उपत्यकाको राजधानि कहाँ थियो ?
कोत पर्वमा सर्वप्रथम मारिने को थिय ?
भण्डारखाल पर्वमा सबैभन्दा पहिला मारिने को थिए ?
नेपालमा महिला शिक्षा को शुरुवात कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो ? – वीरशमसेर
आफ्नो नामको पछाडी ज व रा लेख्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्रि को हुन ? – वीरशमशेर
चर्खा प्रचारमा कसले रोक लगाएका थिए ?
उखडा चाँच कमिसन गठन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन ?
जयतु संस्कृतम आन्दोलन कस्को पालामा भएको थियो ?
नेपाल वैधानिक कानुन कहिले र कुन प्रधानमन्त्रिको पालामा घोषण गरीएको हो ?
२००४ माघ १३ मा पद्म शमसेरको पालामा
घनकुटे राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ?
काजी भिम मल्लको हत्या कसले गर्न लगाएका थिए ?
बहुलाकाजी भनेर चिनिने राजा को हुन् ?
देवशमसेरलाई किन धनकुटे राजा भनिएको हो ?
पदच्युत पछी धनकुटा गइ वसेकाले
दिउँसो १२ वजे तोप पड्काउने चलन कसले चलाएका हुन ?
गोर्खापत्रको प्रकाशन कहिले र कसको पालामा भएको थियो ?
वि सं १९५८ baishak 24 मा
देवशमसेरको पालामा सम्पादकलाई सरकारको स्वस्थ्य आलोचना गर्न स्वतन्त्रता दिइएको
नेपालको इतिहाँसमा सबभन्दा छोटो कार्यकाल भएका राणा प्रधानमन्त्री को हुन ?
देब शमसेर ११४ दिन मात्र
भाषा पाठशालाको स्थापना गर्ने राणा प्रधानमन्त्रि को थिए ?
वि सं १९९० सालको भूकम्प जादाँ नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए ?
चिठ्ठिमा टिकट टाँस्ने चलन कसले चलाएका हुन ?
जंगबहादुरलाई राणा उपाधि दिने को हुन ?
श्री ५ सुरेन्द्र वि सं १९०५ मा
जंगवहादुर नामाकरण कसले गरेका थिए ?
जंगवहादुरका मामा माथवर सिंह थापाले
फिस्टे महाराज भन्नले कसलाई चिनिन्छ?
नेपालका धुर्त प्रधानमन्त्रि भनेर कसलाई चिनिन्छ ?
सिद्धिनरसिंह मल्लले पहिलो व्यापारिक सम्झौता को सँग गरेका थिए ?
कत्र्तिक नाचको प्रचलन कसले चलाएका हुन ?
कात्र्तिक नाचको प्रचलन कहिले देखि भएको हो ?
बि.स. १७२७ देखि
शरणको मरण गर्नु हुदैन भन्ने व्यक्ति को हुन ?
पशुपतिनाथमा म भट्ट पुजारी राख्ने चलन कसले चलाएका हुन ?
यक्ष मल्ल(हारास्ट्रका चार जना भट्ट झिकाई पशुपतिनाथमा पूजा गर्ने चलन चलाएका)
प्रजा मर्दा छाक छोड्ने राजा को हुन ?
मध्य काललाई नेपालको कला र संस्कृतिको विकासको दृष्टिकोणले के भनिन्छ ?
प्रथम मल्ल राजा को हुन ?
भक्तपुरको ९९ चोक र सुनको ढोका भएको ५५ झ्याले दरबार कसले बनाएका हुन ?
कुच विहारबाट डोला झिकाई विवाह गर्ने राजा को हुन ?
डोला प्रथाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन ?
प्रताप मल्ल (कुच विहारबाट रूपमती र राजमतिको डोला झिकाई विवाह गरेका)
जयस्थिति मल्लले जग्गालाई कति भागमा विभाजन गरेका थिए ?
४ ( अब्बल, दोयम,सीम र चाहार )
चारवर्ण छत्तिस जातको सामाजिक व्यवस्था कायम गर्ने राजा को हुन ?
कुमारीचोकको स्थापना कसले गरे ?
मल्लकालका अभागी राजा भनि कुन राजालाई चिनिन्छ ?
जगज्योति मल्ल कहाँका राजा थिए ?
भक्तपुरमा आदि भैरवको रथयात्रा निकाल्ने चलन कसले चलाएका हुन ?
लिच्छवी कालका आदिपुरुष कसलाई मानिन्छ ?
लिच्छवी कालको पहिलो प्रमाणिक अभिलेख कुन हो ?
राजा मानदेवको चाँगुनारायणको अभिलेख
लिच्छवी कालको शासन शैली कस्तो थियो ?
आमालाई सति जानबाट रोक्ने राजा को हुन् ?
नेपालमा सर्वप्रथम कुन राजाको पालामा मुद्रा निस्कासन भएको थियो ?
शान्ति श्री भन्नाले कुन राजालाई चिनिन्छ ?
पशुपतिमा महास्नान गर्ने चलन कसले चलाए ?
पशुपतिमा देवलहरु कसले बनाएका हुन ?
नेपालमा द्धैध शासनको सुरुवात कसको पालामा भएको हो ?
कसको पालामा नेपालमा द्धैध शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो ?
कान्तिपुर शहरको स्थापना कसले गरेका हुन ?
आधुनिक काठमाण्डौको निर्माता/सस्थापक भनि कुन राजालाई चिनिन्छ ?
मरु सत्तल बनाउँदा प्रयोग गरिएको कल्पवृक्षको नाम के हो ?
काष्ठमण्डप कति क्षेत्रफलमा फौलिएको छ ?
२० वर्ग मिटर
अरनिको चिन जादाँ त्यहाँका शासक को थिए ?
अरनिकोले प्रचलनमा ल्याएको प्यागोडा शैलीलाई के भनिन्छ ?
विभाजन पछि पाटनका प्रथम राजा को भए ?
विभाजन पछि भक्तपुरका प्रथम राजा को भए ?
कैलाशकुट भवन कुन ठाउँमा रहेको थियो ?
देवपतन पशुपति नजिक
गोपाल वंशपछि नेपालमा कुन वंशले शासन गर्यो ?
अहिर वंश/अभिर वंश /महिषपालहरुले
अहिरवंशी शासकहरुपश्चात उपत्यकामा कसले शासन सञ्चालन गरे ?
प्रथम किरातिँ राजा एलम्बर (यलुङ) हुन भने अन्तिम किरातिँ राजा को हुन ?
प्रथम किरातिँ राजा एलम्बरले कसलाई पराजीत गरि शासन सत्ता हातमा लिएका थिए ?
सुगौलि सन्धि हुदाँ नेपालका राजा को थिए ?
कसको पालामा नेपालको सिमाना पूर्वमा मेचि देखि पश्चिमामा महाकाली सम्म कायम भयो ?
राजा ज्ञानेन्द्रले कहिले प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए ?
वि सं २०६१ माघ १९ गते
नारायणहिटि छोडि ज्ञानेन्द्र नागार्जुन दरवार कहिले सरे ?
वि सं २०६५ जेठ २९ गते
ज्ञानेन्द्र पदच्यत कहिले भए ?
२०६५ जेठ १५ मा मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भएपछी
जनताका राजा भनेर कुन नेपाली राजालाई चिनिन्छ ?
नेपालको इतिहासका एक्लो वृहस्पति भनेर कसलाई चिनिन्छ ?
नेपाल शब्दको पहिलो उल्लेख कहाँ भएको थियो ?
प्रजामोटा भया दरवार वलियो हुन्छ भन्ने भनाइ कसको हो? – पृथ्विनाराय शाह
पशुपतिका प्रथम भट्ट पुजारी को हुन ?
अरनिको वास्तवीक नाम के हो ?
बहादुर शाहको अर्को नाम के थियो ?
सुन्धाराको निर्माण कसले गरेका हुन ?
भीमसेन थापाले कहिले सुन्धाराको निर्माण गराएका थिए ?
विसं १८८१ मा
महेन्द्र राजमार्गको शिलन्यास कसले कहिले गरेका हुन ?
श्री ५ महेन्द्र ले वि सं २०१९ वैसाख १ मा
नेपालमा फिल्म बनाउन का लागि उत्प्रेरणा दिने को हुन ?
कोत पर्व अलौ पर्व भण्डार खल पर्व कुन राजाको पालामा घटेका घटना हुन ?
नेपालका सालिन छवि भएका राजा भन्नाले कुन राजालाई चिनिन्छ ? – विरेन्द्र
चश्मा लगाउने पहिलो नेपाली को हुन ?
भक्तपुरमा विस्केट जात्राको सुरुवात कसले गरेका हुन ?
अरिदेव मल्ल पछि राजा हुने व्यक्ति को हुन्
अरिदेव मल्लका छोरा को थिए ?
संहिता पाठ नामक हस्तलिखित ग्रन्थका रचनाकार को हुन ?
मल्ल वंशका सबैभन्दा शक्तिशालि राजा भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ ?
काल भैरवलाई हसाउँने राजा को हुन ?
दितीय विश्वयुद्द हुदाँ नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए ?
नेपालमा उद्योग का संस्थापक भनेर कसलाई भनिन्छ ?
नेपालको सबैभन्दा पुरानो नहर चन्द्र नहर कहिले र कस्को पालामा निर्माण भएको थियो ?
चन्द्र शमसेरको पालामा वि सं १९६५ मा निर्माण भएको
नेपालको पहिलो राष्ट्रिय जनगँणना कहिले र कसको पालामा भएको थियो ?
चन्द्र शमसेरको पालामा वि सं १९६८ मा
नेपालको पहिलो जलविधुत आयोजना कुन हो र कसले स्थापना गरेका हुन ?
फर्पीङ जलविद्धुत केन्द्र, चन्द्र शमसेर
सिद्धिनरसिंह मल्लका छोरा को थिए ?
गर्मीमा पञ्चाग्नि ताप्ने र जाडोमा चिसो ढुङगामा बसि तपस्या गर्ने राजा को हुन ?
बुठानिलकण्ठको पानी हनुमानढोका सम्म ल्याउन कुलो बनाउने राजा को हुन ?
प्रताप मल्लले रानी पोखरीको निर्माण किन गरेका थिए ?
छोरा चक्रपालेन्द्र मल्लको मृत्युमा शोकाकुल भएकी रानीलाई सान्त्वना दिन
हरिसिद्धिको नाच हेर्दाहेदै मर्ने राजा को हुन ?
प्रताप मल्ल (बि.स. १७३१ म )
देवपतन स्थित जयवागेश्वरीको मन्दिर कसले बनाएका थिए ?
विवाह पछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदल्ने चलन कसले चलाए ?
जग्गा धनिलाई तल्सिङ र कमाउनेलाई मोही भन्ने चलन चलाउने राजा को हुन ?
सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात कसले गरे ?
लिच्छवी शासन काल अन्तर्गत फेलापरेको पहिलो प्रमाणिक अभिलेख कुन हो ?
राजा मानदेवको सन् ४६४ को चाँगुको अभिलेख हो । जसमा मानदेव भन्दा अगाडिका तीन पुस्ताको विवरण दिईएको छ ।
लिच्छवी कालका प्रथम राजा को हुन ?
लिच्छवी कालका अन्तिम राजा को हुन ?
हनुमान ढोका अगाडिको घण्टा बालाजुको २२ धारा बनाउने को हुन् ?
नेपालको प्रथम राजदरबार कुन हो ?
मानगृह कसले निमार्ण गरेका हुन् ?
नेपालमा प्रचलनमा आएको प्रथम मुद्रा कुन हो ?
नेपालका प्रमाणिक महाराजा कसलाई मानिन्छ ?
नेपालमा सर्व प्रथम बग्गी चढ्ने ब्यक्ति को हुन ?
सर्व प्रथम देशको सम्पूण जग्गाको नापी कसले गराएका थिए ?
प्रताप मल्लले काल भैरवको मूर्ती कहाँबाट ल्याई हनुमानढोकामा राख्न लगाएका थिए ?
पृथ्विनारायण शाहको छोरी को थिइन ?
१२ वर्षे सम्यक पुजा को थालनि कसले गरेका थिए ?
वसन्तपुरको नौ तले दरवार कसले निर्माण गरेका थिए ?
पृथ्विनारायण शाहको लालन पालन कसले गरेको थियो ?
जेठि आमा चन्द्र प्रभावति वाट
पशुपतिमा भट्ट पूजारी राख्ने को हुन ?
लिच्छवीकालीन आकाशको पूर्ण चन्द्र भनी कुन लिच्छवी राजालाई चिनिन्छ ?
तिब्बतमा शरण लीई बस्ने लिच्छवी राजा को हुन् ?
उदयदेव (नरेन्द्रदेवका बाबु उदयदेवलाई धुर्वदेवले सत्ताच्यूत गरेकाले)
उदयदेवलाई धुर्वदेवले सत्ताच्यूत गरेपछि उदयदेव कहाँ शरण लिई बसेका थिय ?
भोटो जात्राको चलन कसले चलाएका हुन ?
नेपालको पहिलो वैङ्क नेपाल वैङ्क लिमिटेडको स्थापना कहिले र कस्को पालामा भएको हो ?
वि सं १९९४ कार्तिक २० जुद्ध शमसेरको पालामा
एस एल सी वोर्डको स्थापना, जन्म मृत्यु दर्ता अड्डाको स्थापना कसको पालामा भएको हो ?
जुद्ध शमसेरको पालामा
श्री ५ विरेन्द्रको वंशनाश हुनेगरी विभत्स नरसंहारकारी नारायणहिटि हत्याकाण्ड कहिले भएको थियो ?
वि सं २०५८ जेठ १९ मा
दिपेन्द्र लाई महाराज धिराज घोषणा कहिले गरीएको थियो ?
वि सं २०५८ जेठ २० अचेत अवस्थामा
दिपेन्द्रको मृत्यू कहिले भएको थियो ?
२०५८ जेठ २२ मा
ज्ञानेन्द्र लाई नेपालको महाराज धिराज घोषणा कहिले गरीयो ?
२०५८ जेठ २२
त्रिभुवनले भारतिय राजदुतावास मा शरण लिइ दिल्लि प्रस्थान गरेपछि प्रधानमन्त्रि मोहन शमशेरले कसलाई नेपालको महाराज घोषणा गरेका थिए ?
श्री ५ ज्ञानेन्द्र
जयस्थिति मल्लले कस्तो प्रकारको विवाहलाई अनलोम विवाह मानेका छन ?
तल्लो जातकी स्त्री र माथिल्लो जातको पुरुषबीच हुने विवाह
प्रतिलोम विवाह भन्नाले कस्तो विवाहलाई बुझिन्छ ?
जयस्थिति मल्लका अनुसार तल्लो जातको पुरुष र माथिल्लो जातको महिलाबीच हुने विवाह
जातिय पेशा र पहिचानको व्यवस्था कुन राजाको पालामा भएको हो ?
सवै भन्दा कम उमेरमा राणा प्रधानमन्त्रि हुने राणा को हुन ?
जंग बहादुर २८ वर्षमा
नयाँ मुलुक भन्नाले कुन कुन ठाँउलाई चिनिन्छ ?
बाँके वर्दिया कैलालि र कञ्चनपुर
दाशत्व मोचन कहिले र कसको पालामा भएको थियो ?
वि सं १९८१ मा चन्द्र शमसेर
खड्क निसान छापको चलन कसले चलाएका हुन ?
मिलिटरी अस्पताल कसले निर्माण गरेका हुन ?
किराँतहरुले पशुपतिनाथलाई के भनि आराधाना गर्थे ?
किराँतहरुले शिव पार्वतीलाई के मान्थे ?
शिवलाई पारोहाङ र पार्वतीलाई सुम्निमा
इन्द्रजात्रामा आकाश भैरवको शिरलाई कसको शिरको रुपमा प्रदर्शन गरिन्छ ?
नेपालमा पाईएको किराँतकालीन कलाकृति कुन हो ?
विरुपाक्षको मूर्ति (यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति हो ।)
१०२ फिट अग्लो तुलजा मन्दिर बनाउने को हुन ?
तलेजु भवानीलाई तुलजा, तुर्जा, तलेजी आदि नामले पूर्जा अर्चना गरिन्छ ?
हरेक दशैमा तुलजा भवानीलाई मन्दिरबाट हनुमानढोकाको मूल चोक ल्याइन्छ र नवमीमा पुनःमन्दिर लगिन्छ ।
तलेजु भवानीको मन्दिर कहिले खुल्छ ?
बर्षमा एक दिन (राम नवमीको दिन ) सर्वसाधारणको लागि
नेपालको इतिहासमा आर्दश शासकको रुपमा चिनिने राजा को हुन् ?
महासामन्त, कलहाभिमानी(सरस्वतीको भक्त), पशुपतिपादानुगृहित, पदवी धारण गर्ने राजा को हुन् ?
अंशुवर्माको बारेमा कुन प्रसिद्ध चिनीया यात्रीले वर्णन गरेका छन् ?
अंशुवर्मालाई कसले सत्ता दिएका थिए ?
उनका मामा शिवदेवले
सत्ता प्राप्त गरेर शासन चलाई पुनः सोही वंशलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति को हुन् ?
सिंहदरवारको निर्माण हुदाँ नेपालका प्रधानमन्त्रि को थिए ?
गेहेन्द्र शमसेर काण्ड हुदाँ नेपालका प्रधानमन्त्रि को थिए ?
के हो गेहेन्द्र शमसेर काण्ड ?
चन्द्र शमशेरको पालामा घटेको चर्चित काण्ड (चन्द्र शमसेरले विष खुवाइ गेहेन्द्र को हत्या गरेको काण्ड हो )
चन्द्र शमसेरका ज्वाइ को थिए ?
वझङी राजा जयपृथ्वि बहादुर सिंह
नयाँ मुलुक अंग्रेजले किन फिर्ता गरे ?
जंग बहादुरले सन १८५७ को भारतमा भएको सिपाही विद्रोह लाई दवाउन अंग्रेजलाई सहयोग गरे वापत नेपाल लाई सन १८६० नोभेम्वर १ मा फिर्ता गरेको
अरुका कुरा छोड आफ्ना छोरा छोरी लाई अंग्रेजि पढाउ यो भनाइ कसको हो ?
जंग बहादुर राणा को बेलायत वाट फर्के पछी
नेपालम सवैभन्दा पहिले रेडयो सेट राख्ने ब्यक्ति को हुन ?
सुन्दरी जलबिद्यूत आयोजनाको विधुत् र पानी सर्वसाधाराण लाई उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रि को हुन ?
मानदेवलाई प्रमाणिक राजा किन भनिन्छ ?
मानदेवको समयदेखि प्राचिन नेपालको इतिहास बढी स्पस्ट र भरपर्दो भएकाले
लिच्छवीकालीन समयमा केन्द्रमा बस्ने जनतालाई के भनिन्थ्यो ?
लिच्छवीकालीन समयमा प्रान्तमा बस्ने जनतालाई के भनिन्थ्यो ?
लिच्छवीकालमा सिंचाई गर्ने कुलोलाई के भनिन्थ्यो ?
नेपाल सम्वत कहिलेदेखि प्रचलनमा आएको हो ?
लिच्छवीकालीन तामाको उद्योग सञ्चालित क्षेत्रलाई के भनिन्थ्यो ?
लिच्छवीहरुको राजधानी कहाँ थियो ?
महासामन्त पदवी धारण गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन् ?
नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम महाराजधिराजा उपाधि प्राप्त गर्ने शासक को हुन ?
अंशुवर्माको शासन काललाई के भनेर चिनिन्छ ?
नेपालमा सर्वप्रथम विजुलि कहिले र कस्को पालामा बलेको थियो ?
१९६८, चन्द्र शमसेरको पालामा
सति प्रथाको उन्मुलन कहिले र कस्को पालामा भयो ?
वि सं १९७७ मा चन्द्र शमसेरको पालामा
नेपालको इतिहासमा धिरशमसेर का कति भाई छोरा प्रधानमन्त्रि भएका थिए ?
५ विर शमसेर, देव शमसेर, चन्द्र शमसेर, भिम शमसेर र जुद्ध शमसेर
लिच्छवी कालमा ललितपुरलाई के भनिन्थ्यो ?
ललितपुरको पुरानो नाम के हो ?
नेपाल संवत कुन राजाको पालादेखि प्रचलनमा आएको हो ?
नेपाल संवत कसले चलाएका हुन ?
नेपाल चार जात छत्तिस वर्णको फुलवारी हो सबैलाई चेतना भया यो भनाइ कसको हो ?
पृथ्वि नारायण शाह
वैसाख १ गते लाई आधिकारीक रुपमा नयँ वर्षको रुपमा मनाउने सुरुवात कस्को पालादेखि भएको हो ?
वि सं १९६१ देखि चन्द्र शमसेरको पालामा
अमाली प्रथाको खारेजि कहिले र कस्को पालामा भयो ?
वि सं १९६८ मा चन्द्र शमसेर को पालामा
प्रथम विश्वयुद्दहुदाँ नेपालका प्रधानमन्त्रि को थिए ?
मकै पर्व कहिले र कसको पालामा भएको थियो ?
चन्द्र शमसेरका पालामा १९७७ मा
जंगबहादुरलाई राणाको पदवी सुरेन्द्रले कहिले दिएका थिए ?
वि सं १९०५ जेठ ९मा
कतार भ्रमण गर्ने नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्रि को थिए ?
नेपालमा कगजि नोटको निश्कासन कहिले र कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो ? -वि सं २००२ अशोज १ गते जुद्दशमसेरको पालामा
सदर चिडिया खानाको स्थापना कहिले र कस्को पालामा भएको थियो ?
वि सं १९९८ मा जुद्द शमसेरको पालामा
आधुनिक संविधान निर्माण गर्न अंग्रेज सरकार संग विशेषज्ञ को माग गर्ने प्रधानमन्त्रि को थिए ?
यिनको पालामा कर्मचरीलाई विदाको, व्यवस्था काठमाण्डौको विभिन्न ठाँउहरुमा उजुरी पेटिका को व्यावस्था,कृषिको लागि वैज्ञानिक सुधारको प्रयास जस्ना कार्यहरु भएका थिए
तेर्सो पुस्ताका राणा प्रधानमन्त्रि भनेर कसलाई भनिन्छ ?
पद्म शमसेरले नारी शिक्षाको व्यवस्था, कन्या स्कुल खोलेका थिए, श्री ३ को महाराजको स्विकृत लिएर विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था, काठमाण्डौ नगरपालिका गठन गर्न स्विकृति ,नेपाल खद्य परीषदको स्थापना २००४ असोज २०, नेपाल साहित्य परिषद स्थापना र कवि सम्मेलन जस्ता सुधारका कार्यहरु गरे
नेपालमा सर्वप्रथम कसले विदेशि वैङ्कमा पैसा राख्ने चलन चलाएका थीए ?
रानी पोखरीको पुरानो नाम के हो ?
सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा परम्पराको चलन कसले चलाएका हुन ?
गोपाल राजवंशावलीको रचना कुन राजाको पालामा भएको हो ?
सर्वप्रथम पेशागत हकहितको संरक्षण गर्ने राजा को हुन ?
सामाजिक पुर्नगठन गरी जातीय आधारमा समाजको व्यवस्था गर्ने राजा को हुन ?
राज्य त्याग गरी धर्मकर्ममा लाग्ने राजा को हुन ?
उषाहरण र जैमिनी भारत नामक नाटकका रचयिता को हुन ?
कान्तिपुरको हारपश्चात जयप्रकाश मल्लले कहाँ शरण लिएका थिए ?
कान्तिपुरका अन्तिम मल्ल राजा को हुन ?
राजघरानाको दाहसंस्कारको बेला बजाईने बाजालाई के भनिन्छ ?
जयस्थिति मल्लले राजघरानाको दाहसंस्कारको बेला दिपकराग बजाउने चलन चलाएका थिए भने सर्वसाधारणको दाहसंस्कारको बेलाबजाईने बाजालाई के भनिन्थ्यो ?
शब्द विद्या ग्रन्थको रचना कसले गरेका हुन् ?
अंशुवर्माले रचना गरेको शब्द विद्या ग्रन्थ कस्तो ग्रन्थ थियो ?
हिन्दु र वौद्ध दुवै धर्म मान्ने राजा को हुन् ?
मल्लकालमा सबैभन्दा बढी मुद्रा निस्कासन गर्ने राज्य कुन हो ?
नेपाली मुद्रा भोटमा चलाउने राजा को हुन ?
अरनिकोको वास्तविक नाम के थियो ?
अरनिको बाबुको नाम के थियो ?
कान्तिपुरमा मानव बस्ति बसाउने राजा को हुन ?
लिच्छवीकालीन राजाहरुमा मानदेव र अंशुवर्मा पछि तेस्रो शक्तिशाली राजा कसलाई मानिन्छ ?
झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन कसले चलाएका हुन ?
पशुपतिनाथलाई स्वर्णमय बनाउने को हुन ?
प्यागोडा शैलिको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर कुन हो ?
चाँगुनारायणको मन्दिर कसले बनाएका हुन् ?
कहाँ छ चाँगुनारायणको मन्दिर ?
नेपाली इतिहासको मुल भक्तपुरमा
अभिरवंशी दोर्सो राजा को थिए ?
अभिरवंशका अन्तिम राजा को हुन् ?
अभिरवंशका कति राजाले नेपालमा शासन संचालन गरे ?
पाटनको पुरानो नाम के हो ?
कुन किराँत राजालाई गोपाल राजवंशावलीमा हात्ती भनेर उल्लेख गरिएको छ ?
पटनको पुरानो नाम यल कसको नामबाट राखिएको/रहन गएको हो ?
नेपालमा मानव बस्तीको सुरुवात गर्ने पहिलो वंश कुन हो ?
नेपालमा राज्य व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने पहिलो वंश कुन हो ?
गोपाल भन्नाले के बुझिन्छ ?
राजालाई नारायणहिटिका ठकुरी भन्ने राणा प्रधान मन्त्रि को हुन ?
काठमाण्डौ उपत्यकामा बस्ती बसाउने मञ्जुश्री हुन भने सहर कसले बसाए ?
छालाको मुद्र प्रचलनमा ल्याउने राजा को थिए ?
सिद्धि नरसिंह मल्ल (ललितपुरका राजा)
बंगालका शासक समसुद्दीन इलियास ले नेपाल उपत्यकामा कहिले आक्रमण गरेका थिय ?
वि सं १४०६ मा
भीमसेन थापाले हुलाक लाई कसरी विभाजन गरेका थिए ?
कागजे र थाप्ले हुलाक गरी २ भागमा
नेपालमा पहिलो संसदिय चुनाव हुदाँ नेपालका राजा को थिए ?
नेपालमा पहलो संसदिय निर्वाचन कहिले भएको थियो ?
वि सं २०१५ मा
स्वामी महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ ?
आफ्नै भाईद्वारा काटिने राजा को हुन?
नरेन्द्रदेवले कसको सहयोगमा गुमेको राज्य फिर्ता ल्याएका थिय ?
बाबुको पालामा गुमेको राज्य तिब्बतको सहयोगमा फिर्ता गर्ने लिच्छवी राजा को हुन् ?
बालकको सालनाल काट्ने चलन कसले चलाए ?
पशुपतिनाथलाई राजमान्यता दिने राजा को हुन् ?
युवराजधिराजको घोषणा गर्ने प्रचलन सर्वप्रथम कसको पालादेखि सुरु भएको हो ?
दरबारलाई ललितपुरबाट कान्तिपुरमा सार्ने राजा को हुन ?
गुणकामदेवले चलाएका जात्राहरु : इन्द्र जात्रा, लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा, हिले जात्रा,श्रृङ्भेरी जात्रा आदि।
सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना गर्ने राजा को हुन् ?
अरनिकोलाई चिनमा कुन उपाधि दिईएको थियो ?
क्यानल्यु नाईफ, नासथु
पाटनको कृष्ण मन्दीरमा कति गजुर छन ?
मल्ल वंशका अभागी राजा भन्नाले कुन राजा लाई चिनिन्छ ?
लक्षहोम पक्ष श्राद्द कलस पुजाको चलन कसको पालामा चलेको मानिन्छ ?
पाटन ढोकाको अर्को नाम के हो ?
कान्तीपुरलाई काठमाण्डौ नामाकरण गर्ने राजा को हुन ?
लक्ष्मी नरसींह मल्ल
नेपालमा नायवी भई शासन गर्ने पहिलो महीला को हुन ?
देवल देवी राजा रुद्र मल्लकी रानि
देवल देवीले नायक देवी लाइ राज्यको उत्तराधीकारी बनाइ राज्य सञ्चालन गरेकि थिइन
नायकदेवी नेपालको राजगद्दीमा वस्ने प्रथम महिला हुन
नायकदेवी र जगतसिंह बाट वि सं १४०३ मा राजल्ल देवीको जन्म भएको थियो
जयस्तिथि मल्ललाइ झिकाइ वि सं १४१४ मा राजल्ल देवी को विवाह भएको थियो
चारकुने मुद्राको प्रचलन कसले चलाएका हुन ?
तलेजु भवानिको जिवित स्वरुप कसलाई मानिन्छ ?
नेपालमा पाइएको किरात कालिन कलाकृति कुन हो ?
विरुपाक्ष को मुर्ति
लिच्छवीकालको राजकीय भाषा के थियो ?
भृकुटिलाइ हरीततारा भनिन्छ भने उनको तिब्वति नाम के राखिएको थियो ?
भोटो जात्राको चलन कुन लिच्छवि राजाले चलाएका हुन ?
नेपालेश्वर भन्नाले कुन मल्ल राजालाई चिनिन्छ ?
श्री निवाश मल्ल
बुढानिलकण्ठ भगवानले राजा प्रताप मल्ललाई के श्राप दिएका थीए ?
अव उप्रान्त तिमि र तिम्रा सन्तानले मेरो दर्शन गरेमा मृत्यू हुनेछ भनेर
कुन राजाको पालादेखी राजपरीवारको सदस्यहरु बुढानिलकण्ठ दर्शन गर्न जादैन थिए ?
बुढानिलकण्ठले राजा प्रताप मल्ल लाई किन श्राप दिएका थिए ?
बुढानिलकण्ठको पानि कुलो खनेर हनुमान ढोका सम्म ल्यएकोले
आफ्ना पितालाइ कैदगरी आफु राजा हुने मल्ल राजा को हुन् ?
नेपालको कुन वंशको शासनकललाई अध्यारो यूग भनिन्छ ?
महाराजधिराज र परमभट्टारकको पदवी धारण गर्ने राजा को हुन ?
काठमाण्डौ छाउनिमा रहेको राष्ट्रीय संग्राहालय कसले निर्माण गराएका थिए ?
बाघ दरवार मुन्सी खाना टुँडिखेल को निर्माण कसिले गरेका थिए ?
सुगौली सन्धि हुदाँ नेपालका प्रधानमन्त्रि को थिए ?
३८ तथा ४२ सालको पर्व कसको पालामा भएको थियो ?
पृथ्वि विरविक्रम शाह
शाहबंशिय इतिहाँसमा सवैभन्दा लामो शासन गर्ने राजा को हुन ?
मञ्जुश्रीले बसाएको नगरलाई के भनिन्थ्यो ?
त्रिभुवनको प्रतिमा कहाँ स्थापना गरिएको छ ?
स्विटजरल्याण्डको ज्यूरीच क्यान्टम अस्पताल परीसरमा
लिच्छवीकालमा वस्तुको तौल लिन के को प्रयोग गरिन्थ्यो ?
लिच्छवीकालीन अभिलेखहरु कुन भाषामा छन् ?
लिच्छवीकालमा कुन लिपि प्रचलनमा थियो ?
नाग र वासुकी पूजाको चलन चलाउने राजा को हुन् ?
हनुमानढोका बाहिर २ ओटा हनुमानका मूर्ती स्थापना गर्ने राजा को हुन ?
सर्वप्रथम दुरविन प्रयोग गर्ने राजा को हुन् ?
नेपालको इतिहासमा सन्की महाराज बहुला युवराज भनेर कसलाई चिनिन्छ ?
क्रान्ति को नारा लगाउन जति सजिलो छ शान्ति ल्याउन त्यति नै गाह्रो छ यो कसको भनाइ हो ?
श्री ५ राजेन्द्र लाई राजगद्दि वाट पदच्युत गरी बन्दी बनाउने को हुन ?
निर्वाणानन्द स्वामी उपाधि लिने राजा को हुन ?
श्री ५ महेन्द्र ले निर्दलिय पञ्चायति व्यावस्थाको प्रारम्भ कहिले गरेका हुन ?
वि सं २०१७
सर्वसाधारणका लागी कहिले देखि धरहरा खुल्ला गरीयो?
वि सं २०६१ माघ १ गते देखि
धरहराको निर्माण कहिले भएको थियो ?
वि सं १८८२ मा
कुन शाहवंशिय राजाको पालामा नेपालको सिमाना तेब्बर भएको थियो ?
उपत्यकाको राज्य विभाजन गरि आफ्ना छोराहरुलाइ बाड्ने राजा को थीए ?
नेपालवाट चिन जाने पहीलो ब्यक्ति को हुन ?
पृथ्विनारायण शाहको मावलि कहाँ थियो?
पृथ्विनारायण शाहको पहिलो विवाह कहिले र को संग भएको थियो ?
वि सं १७९४ मा इन्द्र कुमारी संग
युरोप भ्रमण गर्ने र नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउने उल्लेखनिय भुमिका खेल्ने राजाको हुन ?
नेपालको राजदरवार हनुमान ढोका बाट नारायणहिटि कसको पालामा सारीएको थियो?
श्री ५ पृथ्वि विरविक्रम शाह को पालामा वि सं १९४३ मा
गोपाल राज वंशावली कसको पालामा तयार पारिएको हो ?
नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश कुन हो ?
एलम्बरलाई अर्को के नामले चिनिन्छ ?
किरातँहरुको मूल थलो कहाँ थियो ?
पूर्वी पहाडको तामाकोशी र सुनकोशी बिचको भूभागमा
कार्तिक नाचलाई एक महिनाको बनाउने राजा को हुन ?
योग नरेन्द्र मल्ल
किराँतहरुको राजधानी/शासन केन्द्र कहाँ थियो ?
गोकर्ण पछि शंखमूल
२८ औँ किराँति राजा पटुकोले राज्य शङ्खमुलमा सारेका थिए ।
पशुपति पारी रहेको वनलाइ के भनिन्छ ?
राजा विरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरीयोस भनि विश्व सामु कहिले प्रश्ताव राखेका थिए?
वि सं २०३१ फागुन १३ मा राज्याभिसेक को अवसरमा
यलम्बरको पूर्ण कदको शालिक कुन ठाउँमा छ ?
किराँत शासन व्यवस्था कुन धर्मग्रन्थका आधारमा सञ्चालित थियो ?
नेपालमा कति अहिरवंशी शासकहरुले शासन सञ्चालन गरे ?
तीन जनाले( वर सिंह, जय सिंह र भुवन सिंह)
नेपाल प्रबेश गर्नुभन्दा पहिला अहिरवंशीहरुको मूल थलो कहाँ थियो ?
भारतको मथुराको वृन्दावन
कैलाश कुट भवनको महिमा कहाँको शीलालेखमा उल्लेख छ ?
अंशुवर्माले शिक्षालाई कसरी विभाजन गरेका थिए ?
शैव, वैष्णव र वौद्ध गरी ३ भागमा
नेपाल मण्डलेश्वर भन्नाले यक्ष मल्ललाई चिनिन्छ ?
दत्तात्रेयको मन्दिर निर्माण गराउने को हुन ?
अरनिको चिन जादाँ कति बर्षका थिए ?
कति जना कलाकारको नेतृत्व गरि उनी चिनतर्फ लागेका थिए ?
चिनमा गई नेपाली कलाको प्रचार गर्ने को हुन ?
काष्ठमण्डपको भित्री भागमा के राखिएको छ ?
एउटा शिवलिङग र चार कुनामा गणेश मूर्तिहरु
शिलालेखमा स्वस्ति नेपालभ्य लेख्ने राजा को हुन ?
स्वस्ति नेपालभ्यको अर्थ के हो ?
नेपालको कल्याण होस् ।
लिच्छवी कालमा शिक्षाको माध्याम भाषा के थियो ?
संस्कृत र पाली
नेपालमा लिच्छवीहरुको आगमन कहाँबाट भएको हो ?
भारतको वैशाली(मुजफ्फरपुर नगरको बसाठ भन्ने वैशालीबाट)
मानदेवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ ?
कुन धातुबाट बनाईएको थियो मानाङ्क ?
मानाङ्कमा के को चित्र अंकित थियो ?
श्री मानाङ्क र श्री भोगिनी (अगाडि भागमा सिंह र कमल लिएकी देवी र पछाडी को भागमा श्री भोगीनी )
पशुपतिको मन्दिर स्थापना गर्ने को हुन ?
पशुपतिनाथको हालको मूर्ति कसले बनाएका हुन ?
सिंहासन शब्दको प्रचलन कुन राजाको पालादेखि प्रचलनमा आएको हो ?
नरेन्द्रदेवको (उनको आसनमा सिंहको आकृति भएकाले सिंहासन शव्दको प्रचलित भएको बुझिन्छ ।)
पण र पुराण कसले कसले प्रचलनमा ल्याएका मुद्रा हुन ?
१ पुराणमा कति पण हुन्थ्यो ?
गुणकामदेव कान्तिपुर शहरको स्थापना गर्दा कति घरहरु बनाएका थिए ?
अरनिकोलाई राष्ट्रिय विभूति कहिले घोषणा गरियो ?
नेपालको एक मात्र राष्ट्रिय कलाकार को हुन ?
नेपाली प्यागोडा शौलीको विकास गर्ने श्रेय कुन कलाकारलाई जान्छ ?
सबैभन्दा सानो मुद्रा जावा निस्कासन गर्ने राजा को हुन ?
उपत्यका बाहिर सबैभन्दा पहिले मुद्रा निस्काशन गरिएको ठाउँ कहाँ हो ?
पाञ्चाली प्रथाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन् ?
वलम्बुमा मानव वस्ती कसले बसाएका थिए ?
वोधिसत्वको अवतार मानिने लिच्छवी राजा को हुन् ?
बस्नेत पर्व भन्नाले कुन पर्वलाई चिनिन्छ ?
भण्डारखाल पर्वलाई किन बस्नेत पर्व भनिन्छ ?
यस पर्वमा धेरै बस्नेतहरुको हत्या भएकाले
कोत पर्व हुदाँ नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए ?
कोत पर्वकी आमा भन्नाले कसलाई चिनिन्छ ?
जयस्थिति मल्लले उपत्यकाका नेवार समुदायलाई कति उपजातमा विभाजन गरेका थिए ?
मानव न्यायशास्त्र कसको कृति हो ?
जयस्थिति मल्लको पालामा बनेको संहिता कुन हो ?
मानव न्यायशास्त्र (बि.स. १४३७ मा बनेको )
प्रताप मल्लका बाबुको थिए ?
आफ्नो बाबुलाई कैद गरि आफू राजा हुने मल्ल राजा को हुन् ?
आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने राजा को हुन ?
विस्केट जात्रा कसले चलाएका हुन् ?
घोडे जात्राको चलन कसले चलाएका हुन ?
कवि चुडामणि सम्राट भनी कुन राजालाई चिनिन्छ ?
जनताको रायविना कुनैपनि काम नगर्ने मल्ल राजा को हुन ?
गोरखाका राजा रामशाहसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्ने राजा को हुन ?
नरसिंह नृत्यको चलन चलाउने राजा को हुन ?
प्रजाले खाएपछि मात्र खाने राजा को हुन ?
अंशुवर्माको बहिनीको नाम के थियो ?
अंशुवर्माको बहिनी भोगदेवीको विवाह को संग भएको थियो ?
भारतका राजा सुरसेन संग
अंशुवर्माले चन्द्र व्याकरण कसलाई लेखन लगाएका थिए ?
चन्द्र वर्मा गोमी
गोरखा भाषा प्रकाशन समितिको स्थापना कहिले र कसको पालामा भएको थियो ?
वि सं १९६९ मा चन्द्र शमसेरको पालामा
नेपालको नक्सा निर्माण गर्ने, रेलवेको विकास गर्ने, टोपिमा व्यज लगाउने चलन कसले चलाएका हुन ?
जंगबहादुरका बाबु को थिए ?
वाल नरसींह कुवर
जंगबहादुर को वास्तविक नाम के थियो ?
विर नरसींह कुवर
राजर्षि महाराज भनेर कुन राणा प्रधानमन्त्रि लाई चिनिन्छ ?
देवशमसेरले आफ्नो शासनकालमा कति विद्यालहरु स्थापना गराएका थिए ?
देवशमसेर कति दिन प्रधानमन्त्रि भए ?
विराट नगरमा मजदुर हड्ताल कहिले र कसको पालामा भएको थियो ?
वि सं २००३ मा फागुन २१, पद्म शमसेरको पालामा
कार्यालय समय १०-४ कायम गर्ने राण प्रधानमन्त्रि को हुन ?
कार्यालय समय फागुन देखि कार्तिक सम्म १०-५ र मंसिर देखि माघसम्म १०-४ कायम गर्ने प्रधानमन्त्रि को हुन ?
विरशमसेर कहिले प्रधानमन्त्रि भएका थिए ?
वि सं १९४२ मा (४२ सालको काण्ड घटाई काका रणोद्दिपसिंहको हत्यागरी वि सं १९४२ मा श्री महाराज र प्रधानमन्त्रि भए)
नारायणहिटि दरबार को निर्माण कसले गरेका हुन ?
घण्टाघरको निर्माण कसले गरेका हुन ?
लालदरवार र सेतो दरवार कसले बनाएका हुन ?
विर पुस्तकालयको स्थापना कसले गरेका हुन ?
कसले चलाए दिपकराग बजाउने चलन ?
जमिन बेचबिखन गर्न र बन्धक राख्न पाईने व्यवस्था कसले गरेका थिए ?
ब्राहमणलाई पञ्चगौड र पञ्च द्रविडमा विभाजन गर्ने राजा को हुन ?
नेपालको पहिलो प्रमाणिक राजा को हुन् ?
मानदेवको पहिलो अभिलेख कहाँ राखिएको छ ?
जंग बहादुरलाई श्री ३ उपाधि दिने राजा को हुन ?
नेपालको राजधानि काठमाणडौ बाट नुवाकोट मा कसको पालामा सारीयो ?
नेपालमा योजनावद्ध विकाशको थालनि कुन राजाको पालामा भएको थियो ?
जग्गाको नापि गर्न लगाई किसिम निर्धारण गर्ने र अभिलेख राख्ने व्यावस्थाको सूरुवात गर्ने को हुन ?
सन्तान बेच्ने प्रथा सानिआमा व्यर्होने प्रथा जैसि बाहुन समुदायमा मामाको छोरी बिहे गर्ने चलन केहि जातिमा चलेको भाउजु ब्यर्होर्ने चलन माथि नियन्त्रण कसले गरेका थिए ?
बहादुर शाहको पालामा नेपालको सिमाना कहासम्मा फैलिएको थियो ?
पूर्वमा टिस्टा देखि पश्चिममा सतलज सम्म
अंग्रेज इतिहाँसकार कर्क पेट्रिक कहिले नेपाल आएका थिए ?
बहादुर शाहको नायवि कालमा
नेपालमा कतिजना किराँति शासकहरुले शासन सञ्चालन गरे ?
गोपाल वंशावलीमा ३२, भाषा वंशावलीमा २८,कर्क पेट्रिकका अनुसार २७, राईट वंशावलीमा २९ राजाहरुको विवरण पाईन्छ (तथापि , किराँत वंशका २९ पुस्ताका ३२ राजाहरुले झन्डै १५०० बर्ष जति शासन चलाएको मानिन्छ ।)
इतिहारकार राईटका अनुसार, २९ किराँति राजाहरुले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए ?
चौधौ किराँती राजा को थिए ?
नेपालमा सर्वप्रथम शासन चलाउने गोपालहरु कुन वंशका थिए ?
नामका पछाडि गुप्त जोडिएकोले गोपालवंशीहरुलाई गुप्तवंशी पनि भनिन्छ ।
कसको पालामा पशुपति ज्योतिलिङ्ग प्राप्त भएको थियो ?
जनताको धुरीबाट धुवँ नआएसम्म खाना नखाने राजा को हुन ?
साखुँ व्रजयोगिनिको रथयात्रा चलाउने को हुन ?
हनुमान ढोका अगाडि हनुमानको मुर्ती स्थापना गरी हनुमान ढोका दरवार नामाकरण गर्ने राजा को हुन् ?
मञ्जुश्रीले नागदहलाई काटि वनाएको बाटो लाइ के भनिन्छ ?
तलेजु भवानि संग पासा खेल्ने राजा को हुन ?
पृथिविनारायण संग छातार जुत्ता माग्ने राजा को हुन ?
किर्तीपुरमा गई आफु राजा भयको घोषणा गर्ने राजा को हुन् ?
श्री निवास मल्ल हुन
सिद्दिनरसिंह मल्लले प्रचलनमा ल्याएको कार्तिक नाचलाई १५ दिन बाट बढाएर २५ दिन नचाउने चलन कसले चलाए ?
श्री निवास मल्लले
कर्नाटवंसी राजाहरु कहाँ वाट आएका थिए ?
दक्षिण भारतको कर्नाटकबाट नेपाल प्रवेश गरेका हुन
भक्तपुरका राजाहरु मध्य कला प्रेमी तथा वास्तुकलाका मर्मज्ञको रुपमा कुन मल्ल राजालाई चिनिन्छ ?
मल्लकालमा हनुमान ढोकालाइ गुतपौ भनिन्थ्यो भने यस दरवारको अर्को नाम के हो ?
वर्ण व्यावस्था कायम गर्ने राजा को हुन ?
प्रताप मल्ललाइ १५ भाषाका ज्ञाता किन मानिन्छ ?
हनुमान ढोकामा १५ भाषाको शिलालेख स्थापना गरेकाले डोलाजी प्रथा भन्नाले के बुझिन्छ ?
मल्लकालमा दुलहा झिकाएर गरीने विवाहलाई दोलाजी प्रथा भनिन्थ्यो दुलाह दुलहीकै घरमा वस्ने तथा कतै कतै गोत्र र थर पनि दुलहीकै मा परीवर्तन हुने गर्दथ्यो
गुणकामदेवले माठमाण्डौ सहर निर्माण गर्दा प्रतिदिन को खर्च कति थियो ?
नेपाल संवत चलाउने को हुन ?
राष्ट्रीय महत्वका काममा बाहेक बिना मजदुरी काम गराउन नपाइने व्यावस्था को शूरुवात कसले गरेका थिए ?
सैनिक सेवामा आधुनिकरणको सुरुवात श्री पेच चाँद तोडा लगाउने प्रचलन कसले चलाए ?
नेपालका प्रथम प्रधान मन्त्रि र प्रथम सैनिक जनरल को थिए ?
छैँटौ किराँति राजा हुमतिलाई गोपाल राज वंशावलीमा के भनेर उल्लेख गरिएको छ ?
हँति ( डेनियल राईटले छपाएको वंशावलीमा यिनलाई महाभारतको युद्धकालका भनि उल्लेख गरिएको छ ।)
कुन किराँती राजाको पालामा महाभारतको युद्ध भएको थियो ?
छौठौँ राजा हुमतिको पालामा
किराँतहरुको आरध्यदेव को हुन् ?
किराँतकालमा नेपालको शासन व्यवस्था कस्तो थियो ?
गौतम बुद्ध कसको पालामा नेपाल आएका थिए ?
सातौँ किराँती राजा जितेदास्तीको पालामा गौतम बुद्ध काठमाण्डौँ आएको चर्चा गरिएको छ तर गौतम बुद्ध स्वयम् भने आएका थिएनन् उनका चेला आनन्द मात्र नेपाल उपत्यकामा आएर बैद्ध धर्मको प्रचार गरेका थिए (नेपाल परिचय)
मैर्य सम्राट अशोक कसको पालामा नेपाल आएका थिए ?
केहि वंशावलीहरुले चौधौँ किराँती राजा स्थुकोको पालामा अशोक नेपाल आएको उल्लेख गरेका छन् तर वंशावलीको भनाई सत्य देखिदैन् अशोक लुम्बिनि, कपिलवस्तुमा मात्र आएका थिए काठमाण्डौँ उपत्यका आएको कुरा प्रमाणित छैन् । (नेपाल परिचय
सम्राट अशोक भारतको कुन ठाउँबाट नेपाल आएका थिए ?
सम्राट अशोक को सँग नेपाल आएका थिए ?
अशोक स्तम्भको स्थापना कसले गरेका थिए ?
सम्राट अशोक ई.पू. २४९
अशोक स्तम्भमा कुन भाषाको प्रयोग गरिएको थियो ?
नेपालको पहिलो पर्यटक कसलाई मानिन्छ ?
सम्राट अशोकले स्थापना गरेको स्तम्भलाई के भनिन्छ ?
अशोक स्तम्भमा कुन लिपी प्रयोग गरिएको छ ?
ब्राम्ही (ब्राम्ही लिपी नेपालको सबैभन्दा पुरानो लिपी हो)
लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन् ?
जर्मनीका डा.एन्टोन फ्युहरर(यिनी सन् १८९६ मा नेपाल आएका थिए)
सम्राट अशोकले छोरी चारुमतिको विवाह को सँग गरेका थिए ?
देवपाल नामक क्षेत्रीसँग
चारुमति र देवपाल बसालेको शहरलाई के भनिन्छ ?
अभिरवंशीहरुको शासन केन्द्र कहाँ थियो ?
अभिरवंशीहरुको पेशा के थियो ?
अभिरवंशी माइलो राजा भन्नाले कुन राजालाई चिनिन्छ ?
नेपालका प्रथम राजाहरु कुन वंशका थिए ?
गोपालहरु कुन जातिका थिए ?
गोपालवंश/महिषपालहरुको शासन केन्द्र अथवा राजधानी कहाँ थियो ?
गोपालहरुको पालामा नेपालको सिमाना कहाँसम्म फैलिएको थियो ?
पूर्वमा दुधकोशी, पश्चिममा त्रिशुली, उत्तरमा गोसाईकुण्ड र दक्षिणमा चित्लाङ सम्म ।
श्री ५ त्रिभुवनको पालामा कति जना प्रधानमन्त्रि भएका थिए ?
६ जना (चन्द्र शमसेर, भिम शमसेर, जुद्ध शमशेर, पद्म शमसेर, मोहन शमशेर मातृका प्रसाद कोइराला )
राष्ट्र पिता तथा जनताका राजा भन्नाले कुन राजालाई चिनिन्छ ?
मकैको खेति नामक पुस्तक कसले लेखेका हुन ?
सुब्वा कृष्णलाल ले
घरको बाघ बनको स्याल भनेर कुन प्रधानमन्त्रि लाई चिनिन्छ ?
शाहवंशिय इतिहासमा दुइपटक राज्यारोह्ण गर्ने राजा को हुन ?
एग्नेट प्रथा लागु गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन ?
उद्योग परीसदको स्थापना कहिले र कसले स्थिपना गरेका हुन ?
वि सं १९९३ मा जुद्द शमसेरको पालामा
जनकपुर-जयनगर रेलवे कहिले र कस्ले स्थापना गरेका हुन ?
वि सं १९९३ मा जुद्द शमसेरले
नेपालका सुधार प्रेमि राणा प्रधानमन्त्रि भनि कसलाई चिनिन्छ ?
सुधारवादी स्वाभावका देवशमसेर लाई षड्यन्त्र पुर्वक हटाइएको थियो उनलाई नारायणहिटि राजदरवार मा बोलाई बन्दि बनाएपछी श्री ५ लाई रिभाल्भर देखाएर यिनलाई वरखास्त गर्न लागाइएको थियो
स्वास्थ्य उपचारको बाहानामा भारत गएर राजिनामा गर्ने राणा प्रधानमन्त्रि को हुन ?
राणा शासन कालमा कुन कुन प्रधानमन्त्रि लाई वलपुर्वक पदमुक्त गरीएको थियो ?
पद्म शमसेर र देव शमसेर
नेपालमा पहिलो मोटर चढ्ने ब्यक्ति को हुन ?
नेपालमा सर्वप्रथम जेल बनाउने व्यक्ति को हुन ?
विरशमसेरले केन्द्रिय कारागार कहिले स्थापना गराएका थिए ?
वि सं १९५१ मा
हरगौरी विवाह, कुञ्जविहारी नाटक, लेख्ने राजा को हुन ?
संगीत चन्द्र र श्लोकसार संग्रह कसले रचना गरेका कृति हुन ?
पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने राजा(छाता र जुत्ता को अर्थ श्रीपेज र भूमि) को हुन ?
विश्वकै सबैभन्दा सानो मुद्रा जावा निकाल्ने राजा को हुन ?
जयप्रकाश मल्ल( ०.००८ देखि ०.०१४ ग्राम सम्मका )
सामाजिक सुधार गर्ने राजा भन्नाले कुन राजालाई चिनिन्छ ?
पशुपतिको मन्दिर छेउमा रहेको लव र कुशको मन्दिर कसले बनाएका हुन ?
अपराधिलाई आर्थिक दण्ड दिने चलन कसले चलाएका हुन ?
प्रताप मल्ललाई दुरबिन उपहार दिने व्यक्तिको हुन ?
ग्रोबर नाम गरेका एक जना पादरी
हनुमानढोका दरबारका नासल चोक, नरसिंहचोक, सुन्दरीचोक, कालीचोक, मोहन चोक, भण्डारखाल बगौचाको निर्माण गर्ने राजा को हुन ?
नेपालमा राजर्षि हुने पहिलो व्यक्ति को हुन ?
सिद्धिनरसिंह मल्ल पछि पाटनका राजा को भए ?
कसको पालामा नेपालको सम्बन्ध तिव्वतसँग सुरु भएको थियो ?
अंशुवर्मा कुन वंशका थिए ?
भृकुटीले आफू तिव्वत जादाँ आफूसँगै लगेका वौद्ध भिक्षु को थिए ?/ चिनोको रुपमा के लागेकी थिइन ?
शिलमञ्जु/ नामक बुद्धको मुर्ति
तलेजु (तुलजा) भवानीको मूल मन्दिर कहाँ छ ?
काठमाण्डौँ हनुमानढोका दरबार परिसरमा
तुलजा भवानीलाई कहाँबाट ल्याईएको हो ?
नेपालमा तुलजा भवानीलाई प्रवेश गराउने को हुन ?
सिम्रौनगढका कर्नाट वंशी राजा हरिसिंह देव
मल्ल र नेवार समूदायकी इस्टदेवी को हुन ?
महाराजधिराज परमभट्टारक को पदवी धारण गर्ने राजा को हुन ?
चाँगुनारायणको मन्दिरमा कुन देवताको पूजा गरिन्छ ?
भगवान विष्णुको (यो सबैभन्दा पुरानो वैष्णव तीर्थस्थल हो )
गोकर्णमा मानव बस्ति कसले बसाएका हुन् ?
कोहलपुरमा दीप प्रज्वलन गरि पृथ्वी जयन्ती मनाइने
कोरोनाले बन्द सबै क्षेत्र खुला